QM oo bayaan culus kasoo saartay dadkii laga soo masaafuriyey Laascaanood | Dalkaan.com
Home Warkii QM oo bayaan culus kasoo saartay dadkii laga soo masaafuriyey Laascaanood
Muqdisho (dalkaan) – Hay’ada isku dabaridka gargaarka Qaramada Midoobay ee UNOCHA ayaa bayaan ay soo saartay kaga hadashay barakicinta qasabka ee ay haatan Somaliland ka wado Laascaanood, taas oo lagu beegsanayo dadka kasoo jeeda koonfurta.
UNOCHA ayaa shaaca ka qaaday inay aad uga wal wal-walsan-tahay xaaladda dadka laga soo masaafuriyey magaaladaasi, kuwaas oo isugu jiro caruur, dumar iyo rag.
Hay’addan oo Qaramada Midoobay u qaabilsan howlaha isku dabaridka gargaarka ayaa sheegtay inay sidoo kale diyaarinayaan qorshayaal deg-deg ah oo lagu caawinayo dadkaasi.
“Waxaan aad uga walaacsannahay warbixinnada barakac khasab ah oo la qorsheeyay maalmaha soo socda,” ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hay’adda UNOCHA
Sidoo kale hay’adda UNOCHA ayaa ugu baaqday hay’adaha samafarlka inay gurmad deg-deg ah u fudiyaan dadkaasi, iyada oo la kaashanayo maamullada ka jira halkaasi.
“Waxaan ugu baaqeynaa hay’adaha samafalka inay bixiyaan oo dedejiyaan gargaarka degdegga ah, iyadoo lala kaashanayo maamulada maxalliga ah, si loo helo xal waara,” ayaa markale lagu yiri bayaan kasoo baxay hay’adda isku-dabaridka gargaarka QM ee UNOCHA.
Bayaankan ayaa ku soo aadayo, iyada oo Somaliland dad badan oo kasoo jeeda koonfurta ay kasoo masaafurisay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, kuwaas oo gadiid looga soo qaaday magaaladaasi, waxaana hada lagu soo dhoweeyey deegaanada Puntland.
Si kastaba, Somaliland ayaa cambaareyn xoogan kala kulantay daabulida dadkaasi oo u badan ganacsato, muddo sanado, ahna ku dhaqnaa deegaanada maamulkaasi.
Previous articleKylian Mbappe oo qirtay kooxda uu doonayay inuu ku biiro Hadii PSG Fasixi laheyd
Next articleMaxaa kasoo baxay kulanka dhex-maray Farmaajo iyo Abiy?